Fampidiran-ketra taona 2020 4029 miliara ariary no hotratrarina
Nisy ny fihaonana niarahan’ny Fitantanana Ankapoben’ny Hetra (DGI) sy ireo solontenan’ny vondron’orinasa (groupements) tetsy amin’ny DGE (Direction des Grandes Entreprises) Amparibe.
Hain-tany any Atsimo Hanao hetsika vonjy aina ny fanjakana
Tapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly fa hanatanteraka hetsika vonjy aina hamatsiana rano sy sakafo ireo mponina lasibatry ny haintany any atsimo ny fitondram-panjakana .
PFNOSCM VOIFIRAISANA « Ajanony ny tsindry amin`ny firaisamonim-pirenena »
Mitaky ny famotsorana an`i Thomas Razafindremaka (TR) ny vondron`ny firaisamonim-pirenena PFNOSCM VOIFIRAISANA.
Olana ara-tsosialy –Antananarivo Ny zaza mpangataka no lasa jiolahy
Lasa tranga efa mahazatra ny mpanara-baovao ny mandre sy mahita zaza tsy ampy taona, nangarom-paosy, nanao sinto-mahery ka tratra.
Voalazan'ny tompon’andraikitra eo anivon'ny JIRAMA fa vokatry ny fahasimban'ny gropy miisa 04 no nahatonga izany. Fantatra fa efa nisy fahasimbana ireo gropy ireo sady nanampy trotraka ihany koa ny olana ara-tsolika izay tsy nahatosika ireo gropy teny Ambohimanambola, nisy ihany koa ny fahasimbana teo amin’ireo tambajotra manaparitaka ny herinaratra. Ireo no fanamarihana nentin'ny orinasa JIRAMA manoloana ny delestazy. Fantatra ihany koa fa efa voavaha omaly maraina ary tsy tokony hisy intsony izay fanapahan-jiro izay ankoatra ny olana ara-teknika. Io omaly io ihany anefa, ny maraina dia faritra maro no tratry ny delestazy, naharitra adiny roa, ohatra, ny teny Itaosy sy ny manodidina, ny tolakandro tapaka nanomboka tamin’ny 3 ora sy sasany tolakandro ka hatramin’ny 6 ora latsaka fahefany hariva ny herinaratra teny Soanierana…ary na ny fampitam-baovao tao amin’ny pejy facebook ofisialin’ny jirama aza ny alarobia sy omaly alakamisy dia toa misy zavatra mifanohitra. Nambara aloha fa olana ara-teknika no nahatapaka ny herinaratra, avy eo nolazaina indray fa noho ny tsy fisian’ny solika. Mialoha izao ny minisitry ny angovo sy ny tale jeneralin’ny OMH dia nanome toky fa tsy tokony hisy hampikoropaka satria ampy tsara ny solika. Fa inona izany no tena marina ? Sa efa tsy mifampita ny vaovao tena izy koa ny samy mpiara-miasa ka lasa diso na tsy ampy ny serasera atao ?